Ithuluzi Lokuthola Idatha. Lungisa & Phinda Ufinyelele & DBF Amadokhumenti.
DataNumen Database Recovery iyona best indawo yokuthola imininingwane egciniwe emhlabeni. Kubandakanya amathuluzi wokutakula DataNumen Access Repair, yemininingwane yolwazi yokuFinyelela i-MDB ne-ACCDB, kanye DataNumen DBF Repair, okhohlakele DBF imininingwane.
Kungani DataNumen Database Recovery?
Izici eziyinhloko ku DataNumen Database Recovery v2.7
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft Access 95 kuya ku-2016 kanye ne-Access for Office 365 MDB kanye ne-ACCDB yolwazi.
DataNumen Database Recovery 2.5 ikhishwa ngoNovemba 7, 2020
kubuyekeze DataNumen Access Repair kuya ku-3.1.
kubuyekeze DataNumen DBF Repair kuya ku-2.2.
DataNumen Database Recovery 2.4 ikhishwa ngoDisemba 7, 2019
kubuyekeze DataNumen DBF Repair kuya ku-2.1.
DataNumen Database Recovery 2.1 ikhishwe ngoMeyi 31, 2018
kubuyekeze DataNumen Access Repair kuya ku-2.3.
DataNumen Database Recovery 2.0 ikhishwa ngoDisemba 3, 2013
kubuyekeze DataNumen DBF Repair kuya ku-2.0.
DataNumen Database Recovery 1.0 ikhishwe ngo-Ephreli 5, 2006
Ukuhlanganiswa kwedatha okuhlanganisiwe. Kubandakanya amathuluzi wokutakula imininingwane yolwazi eyonakele ye-MS Access kanye DBF imininingwane.
Indawo yokuthola idatha yezinhlelo zokusebenza zeMicrosoft Office, kufaka phakathi iMicrosoft Access, Excel, Word, Outlook kanye ne- PowerPoint.